UThixo engabizwanga Allah | Apg29
Allah akanguye uThixo iBhayibhile nakuye imfundiso Muslim.
Bathe babuvuma ke ukuba Allah nguye uthixo kuphela kwaye AkaThixo kwibhayibhile. Kodwa iinguqulelo ezaziphila Swedish ukuba egqwethekileyo xa Allah bubonakala "uThixo".
Lo mbuzo, ndiya kunikela impendulo elifutshane ukuya kwiphepha ngombuzo .
Wena ke wathi ividiyo Allah kunye Christian kuThixo oziqu zithathu emnye nguThixo omnye. Ungathini na xa bobabini Islam kunye ubuKristu zisekelwe lobuYuda nabo bonke abaprofeti lamaJuda Muslim Koran?
IBhayibhile engabizwanga nguThixo Allah. Igama lakhe YHWH - kuYehova. Eli gama nalo uYesu.
KwabaseRoma 10: 9. Kuba xa uthe wamvuma ngomlomo wakho ukuba uYesu yiNkosi , wakholwa ngentliziyo yakho ukuba uThixo wamvusa kwabafileyo, wosindiswa.
Ngaba Allah kunye YHWH ibe Thixo mnye ngokuqinisekileyo uYesu ebizwa ngokuba Allah.
Allah akanguye uThixo iBhayibhile nakuye imfundiso Muslim:
"Akukho omnye uThixo ngaphandle Allah kunye Muhammad ungumthunywa Allah ."
Ngo-Arabic ukuba "uThixo" yaye "Allah". Ngoko ke amagama ahlukeneyo, nto leyo ibonisa ukuba uThixo akuthethi uThixo. Bathe babuvuma ke ukuba Allah nguye uthixo kuphela kwaye AkaThixo kwibhayibhile. Kodwa iinguqulelo ezaziphila Swedish ukuba egqwethekileyo xa Allah bubonakala "uThixo". Mhlawumbi ngenxa yokuba siye kwi-West ziya edidekile acinga ukuba kwimeko wamaKristu uThixo.
Kodwa "Allah" ligama elifanelekileyo ukuba lithetha "uthixo mkhulu" kodwa elide ifanele ibe kabi uthetha kuThixo kwibhayibhile. Kukho izithixo 300 eMecca baba. Kwezi, Allah uthixo inkulu Muhammad wakhetha waza wenza ukuba lowo uThixo.
UThixo uye unyana
Yohane 3:16. Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama uNyana okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.
2 Kor 5:19. Kuba uThixo waye ekuKristu, elixolelanisa naye ngokwakhe ihlabathi, yaye akazange ndizibalela ngezono zabo, waza walimisa kuthi ilizwi loxolelaniso.
Qur'an Allah akakuthumanga unyana ehlabathini kuba engenanyana.
Ngoko ke, akukho usindiso Allah kwanjengokuba kukho of YHWH - kaYehova - kuba akukho reconciler kwi Koran.
Ngaphezu koko, i-Koran omnye uYesu ngaphezu koko iBhayibhile ichaza ndikungqine. Aba aphelele bantu ezimbini ezahlukeneyo. "UYesu" ye Koran uya ngokupheleleyo nxamnye oko iBhayibhile ikutshoyo ngoYesu.
Ngokutsho kweBhayibhile ayikho Muhammad isithunywa sikaThixo, okanye abathunywa, kuba uYesu wavuka uthi isiqalo nesiphelo. Alpha and Omega oonobumba yokuqala neyokugqibela oonobumba zamaGrike. Ngamanye amazwi, uYesu nguye owokuqala nowokugqibela. Akukho namnye oza phambi uYesu yaye akukho bani uya kuza emva koYesu. Muhammad weza amakhulu eminyaka emva koYesu. Ngaloo ndlela kubonisa ukuba uMuhammad ungumprofeti wobuxoki.